Sawir uu soo dhigay Instagram laacibka Naby Keita, wuxuu heystaa Tikit, Taageerayaasha Reds waxay Moodaan in uu ku socdo Anfield, mase tahay?
Wednesday, December 19th, 2018 - 07:09:18
Tuesday January 09, 2018 - 05:49:47 in Wararka by Muuse Cabdi
RB Leipzig Laacibkeeda ​Naby Keita, ayaa lagu heshiiyay in uu ku biirayo Reds xagaagii dhammaaday, marka la gaaro suuqa dambe ayuuse ballanku ahaa, Jurgen Klopp ayaase dooaya in laacibkan reer Guinean uu 6 bilood kasoo hormariyo waqtigii Ballanta.
Liverpool ayaa xoogaa lacag dheeri ah siin doonta RB Leipzig haddii la isku fahmo in 22-jirka khadka dhexe uu waqtigii ka hor dhaqaaqo, Leipzig ayaase weli ku jirta Europa League waxayna dooneysaa in Sanadkii 2-aad ay xiriir ugu soo baxdo Champions League, suuragalnimada in laacibku baxayo waa mid aan sidaas u badneyn.
Si waliba horumarka uu sameynayo, Naby Keita waa wax weyn, balse laacibka ayaa soo dhigay bartiisa Instagram isagoo heysta Tikit Diyaaradeed, taas ayaa maskaxda taageerayaasha Liverpool u dirtay Farxad iyo fakar horudhac ah.
Sida caadiga ahba, Reds taageerayaasheeda ayaa wadaagay in wiilka xulka Guinean uu ku wajahanyahay Melwood, jeer ay xiddigaha kale ee Liverpool tababar ugu maqanyihiin Cimilo diirran oo dhanka Dubai xero ku taalla ay u ijaarteen.
Nasiib darro, waxay u muuqataa in qaar badan oo taageerayaasha ka mid ah ay qaateen fakar qaldan, Keita ayaa tikit-kiisii keddib lasoo sawiray isagoo daawanaya kulan Basketball ah oo u dhexeeya Mitteldeutsche Basketball Club iyo ​FC Bayern Munich kooxdooda kubadda Kolayga.
Tikitka wuxuu ugu safrayay soo daawashada kulankaas, ee umaba socon magaalada Liverpool sida qaar badan oo taageerayaasha ka mid ah ay qalbiga ku hayeen.